Relationship Archives - MDY Online Knowledge
သစ္စာမရှိတဲ့ချစ်သူနဲ့လမ်းခွဲလိုက်ပြီဆိုတာကို လမ်းမကြီးဘေးမှာ ဆိုင်းဘုတ်တပ်ပြီး ကြော်ငြာခဲ့တဲ့ အမျိုးသား
သစ္စာမရှိတဲ့ချစ်သူနဲ့လမ်းခွဲလိုက်ပြီဆိုတာကို လမ်းမကြီးဘေးမှာ ဆိုင်းဘုတ်တပ်ပြီး ကြော်ငြာခဲ့တဲ့ အမျိုးသား အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ သူ့ချစ်သူကောင်မလေးက သူ့အားလိမ်လည်လှည့်စားနေတာကို သိသွားလိုက်ရတဲ့အခါ သူမနှင့်ပတ်သက်တဲ့ဆက်သွယ်မှု အားလုံးကို ဖြတ်တောက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ထို့နောက် အဆိုပါအမျိုးသားဟာ သစ္စာမရှိတဲ့ သူ့ရဲ့ချစ်သူကောင်မလေးနှင့်သူက လမ်းခွဲလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းကို လူသိထင်ရှားကြော်ငြာဖို့ လမ်းသွားလမ်းလာတွေများတဲ့လမ်းမပေါ်ရှိ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုကို အဆိုပါအသည်းကွဲနေတဲ့အမျိုးသားကြီးက ငှါးရမ်းခဲ့ပါတယ်။ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်ဌားခဲ့တဲ့အပြင် အဆိုပါအမျိုးသားဟာ လော်လန်စက်ဖြင့်လည်း အော်ပြီး ကြေငြာခဲ့ပါသေးတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ၎င်းအဖြစ်အပျက်ရဲ့ဗီဒီယိုကလစ်က social media ပေါ်မှာ …
International News / Relationship
ခင်ပွန်းနဲ့(၁၈)ရက်ပဲပေါင်းပြီး ရတနာတွေခိုးယူကာ လင်ငယ်နောက် လိုက်ပြေးတဲ့အမျိုးသမီး
ခင်ပွန်းနဲ့(၁၈)ရက်ပဲပေါင်းပြီး ရတနာတွေခိုးယူကာ လင်ငယ်နောက် လိုက်ပြေးတဲ့အမျိုးသမီး အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ အိမ်ထောင်ကျပြီးကာစ အမျိုးသမီးငယ်တစ်ယောက်ဟာ လက်ထပ်ထားလို့ (၁၈)ရက်အကြာမှာပဲ ချစ်သူအမျိုးသားနောက်ကို ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်ဟာ Madhya Pradesh ပြည်နယ်၊ Chhatarpur ခရိုင်အတွင်းမှာ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဆိုးတာက အဲဒီအမျိုးသမီးဟာ အတွင်းပစ္စည်း လက်ဝတ်ရတနာတွေကို ခိုးပြေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ရဲကတော့ ဒီဖြစ်စဉ်ကို အမြန်ဖော်ထုတ်နိုင်ရေး ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သတင်းတွေ …
တစ်ဖက်သက် အချစ်ကြီးချစ်ခဲ့မိတဲ့ ကိုလူရိုးကြီးကို မရမကလက်ထပ်ခဲ့တဲ့ လူဖြူမလေး
တစ်ဖက်သက် အချစ်ကြီးချစ်ခဲ့မိတဲ့ ကိုလူရိုးကြီးကို မရမကလက်ထပ်ခဲ့တဲ့ လူဖြူမလေး အချစ်စစ်အချစ်မှန်ဆိုရင် ရေမြေခြားနေလည်း နီးစပ်အောင် ကြိုးစားကြတာပါဘဲ။ လူမျိုးနဲ့ ကိုးကွယ်ရာဘာသာအယူဝါဒမတူတာကိုလည်း တံတိုင်းတစ်ခုလို့ မမြင်တော့ပါဘူး။ အသားရောင်ကွဲပြားနဲ့ အခြေခံစိတ်နေစိတ်ထား၊ မတူညီတဲ့ဘာသာစကားတွေ ရှိလာခဲ့ရင်လည်း ဒါကို ကောင်းကောင်း ကျော်ဖြတ်နိုင်တယ်လို့ သူတို့ ထင်ကြပါတယ်။ အမေရိကန်လူဖြူမလေးနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်က အမျိုးသားတို့ရဲ့ ဖူးစာရေစက်ဟာ လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်က စိတ်ဝင်စားမှု ခံရဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ …
ဖေ့ဘုတ်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့စုံတွဲလေး…(ဓါတ်ပုံ) 1. အခုတလောမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ Facebook တခွင်မှာ လူကြိုက်နှစ်သက်မှုအများဆုံး ခံယူနေရတဲ့ စုံတွဲလေးပါ။ အပြင်ပန်းကြည့်ရင်တော့ မလိုက်ဖက်ဘူးလို့မြင်မိမှာပါ သို့သော် သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်သံယောစဉ်တွေဟာ ဘယ်လောက်ထိခိုင်မြဲနေပြီလဲဆိုတာကိုတော့ ဒီဓါတ်ပုံလေးတွေ ကြည့်ရုံနဲ့ သိရှိနိုင်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဆိုရှယ်အကောင့်တွေမှာ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်သက်တမ်း ၃ နှစ်နဲ့ ၆လပြည့်အဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ပုံရိုက်ကူးခဲ့ပြီး မျှဝေခဲ့ရာမှ လူကြိုက်နှစ်သက်မှု အများဆုံးခံခဲ့ရပါတယ်။ 2. ဝေဖန်တဲ့မှတ်ချက်တချို့ကို …